Xarun Xuquuqal iinsaanka U Dooda Oo Cambaareysay Xayiraadda Wargeyska Hubaal | Salaan Media
Xarun Xuquuqal iinsaanka U Dooda Oo Cambaareysay Xayiraadda Wargeyska Hubaal
(SM-Hargeysa) – Xarunta Xuquuqal iisaanka ee Hargeysa, ayaa ka hadashay tallaabada xukuumaddu albaabada ugu laabtay Wargeyska Madaxa-banaan ee Hubaal, waxayna sheegtay in tallaabadaasi tahay mid aan si sharci ah loo marin.
War-saxaafadeed xarunta Maanta soo saartay ayaa u dhignaa sidan “Maxkamadda Gobolka Hargeysa waxay xayirtay wargeyska madaxabanaan ee Hubaal oo ka soo baxa magaalada Hargeisa. Go’aanka Maxkamadu ma sheegin wax sabab ah oo ay u cuskatay maxkaamaddu xayiradda wargeyska.
Sida ay noo sheegeen masuuliyiinta Hubaal ma jirto wax ogaysiis ah ama yeedhmo ah oo hore loo sii siiyay Hubaal ka hor intaan la soo saarin amarka xayiradda. Sidoo kale ma jirto wax dacwad ah oo lala soo socodsiiyay Hubaal oo u tiil Maxkamadda Gobolka.
Sida ku cad qodobka 28 ee dastuurka waxay ahayd in la siiyo Hubaal fursad uu iskaga difaaci karo ka hor intaan la soo saarin go’aan. Doorka maxkamaduhu waa inay u gar-qaadaan dhinacyada iyaga oo siinaya fursad isku mid ah oo ay ku dhegaystaan, islamarkaana ku dhisaan go’aanadooda qodob sharci iyo asbaab macquul ah. Waxa xeerarka Somaliland dejiyeen hanaan cad oo loo maro dacwadaha ha noqdeen mid ciqaab ah iyo mid madani ahba.
Qodobka 8aad ee dastuurku wuxuu si cad u sheegayaa in muwaadiniint ku leeyihiin sharciga hortiisa sinaan.
Dastuurka Somaliland wuxuu mamnuucay talaab kasta oo lagu cabudhibayo saxaafadda oo ka mid ah xoriyaadka aasaasiga ah ee ra’yi dhiibashada.
24 April 2013 ayay ahayd markii niman hubaysani soo weerareen xarunta wargeyska Hubaal. Waxa dhacdadaas loo qabtay nin Booliis, lamana shaacin natiijo baadhitaan oo ku saabsan cidii ka dambaysay falkaas. Masuuliyiintuna waxaanay waxba ka soo qaadin codsiyo lagaga dalbaday in la sameeyo baadhitaan madaxbanaan.
Xarunta Xuquuqal Insaanku waxay codsanay in laga qaado xayiraadda waregyska Hubaal.
Madaxa Xidhiidhka Dadwaynaha
+252 063 4117496